Bolgara Mpiaro Tontolo Iainana, Nahazo Fandresena Goavana Teny Amin’ny Fitsarana Ny Tolony Ho Fiarovana Ny Valan-javaboarim-Pirenena Ao Pirin (#SavePirin) · Global Voices teny Malagasy
Bolgara Mpiaro Tontolo Iainana, Nahazo Fandresena Goavana Teny Amin'ny Fitsarana Ny Tolony Ho Fiarovana Ny Valan-javaboarim-Pirenena Ao Pirin (#SavePirin)
Voadika ny 02 Mey 2018 13:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Swahili, Français, русский, नेपाली, 日本語, Português, English
Sarintany mivoitra ahitàna ny faritra an-tendrombohitra ao Pirin eo amin'ny rindrin'ny Sampana Mpamonjy Voina an-Tendrombohitra ao Borovets, Bolgaria. Sary an'ny Global Voices, CC-BY.
Nitehaka ireo mpikatroka ho an'ny tontolo iainana rehefa navoakan'ny Fitsarana Avo Bolgara Misahana ny Fitantanan-draharaha ny didy tsy maintsy hampitsaharan'ny governemanta ny fikasàny hanome alàlana ny fanaovana fanorenana vaovao ao amin'ny Valan-Javaboarim-Pirenena ao Pirin, Toerana iray nosokajian'ny UNESCO ho Vakoka Iraisampirenena, raha tsy misy aloha ny fanombanana stratejika momba ny tontolo iainana.
Fiarahamientan'ireo fikambanana, antsoina hoe Ho an'ny Natiora, no nametraka ny fitoriana ary nankasitraka ny fanapahankevitry ny fitsaràna ho toy ny dingana goavana ao anatin'ny tolon-dry zareo hiarovana ilay ampahan-karena sarobidin'ny natiora.
Araka ny WWF-Bulgaria, mpikambana ao anatin'ilay fiarahamientana:
Ilay drafitra [an'ny governemanta] dia manome alàlana ny asa fanorenana eo ambony faritra mirefy in-12,5 avo heny mihoatra noho izay azo nomena alàlana amin'izao fotoana izao ary mety hitondra mankany amin'ny fandripahana ala manodidina ny 60% ao amin'ilay valan-javaboary noho ny resaka ara-barotra (amin'izao fotoana izao, tsy misy mihitsy fanomezandàlana hikapa hazo ho an'ny resaka varotra ao anatin'ilay valan-javaboary). Ny Fiombonambe Eoropeàna no mamatsy vola ity drafitra fampiroboroboana ily.
Niteraka onjam-panoherana naharitra volana dimy nanerana an'i Bolgaria sy tany ivelany ilay loza mitatao amin'ny Valan-Javaboarim-Pirenena ao Pirin. Ny farany indrindra dia nitranga tao Sofia, Blagoevgrad, Plovdiv, Sliven ary Londona tamin'ny 26 Aprily, ka tamin'izany dia notakian'ireo mpandray anjara ihany koa ny hiarovana ny lova voajanahary ao amin'ny faritry ny Ranomasina Mainty.
Nofoanan'ilay didim-pitsaràna ny fanapahankevitra navoakan'ny Minisitera Bolgara misahana ny Tontolo Iainana ary ny Rano hanaiky ny drafitra iray ho fitantanana ny valan-javaboary ao Pirin mandritra ny fepotoana 2014-2020 sy hanorenana fotodrafitrasa iray vaovao ho an'ny fikorisàna ambony ranomandry (ski) ao akaikin'ny tanànan'i Bansko, nefa tsy nisy akory fanaovana Fanombànana Ara-Tontolo Iainana.
Lazain'ireo mpikatroka izay nametraka ilay fitoriana fa hanohintohina ny vala iray manontolo ny karazana fampandrosoana tahaka izany ary manitsakitsaka mivantana ny Torolàlana 2001/42/EO navoakan'ny Fiombonambe Eoropeàna, izay mitaky ny hanaovana fanombànana ara-tontolo iainana raha misy fanapahankevitra mahakasika ny fizahantany, ny indostrian'ny ala ary ny fifangaroana samihafan'ny zavamiaina.
Nohamafisin'ny fitsaràna fa raha tsy atao ny fanombànana ara-tontolo iainana takian'ny lalàna, “tsy manana rariny mihitsy ny ministera tsy hanaovana tombana hoe hisy fiantraikany sa tsia amin'ny tontolo iainana ireo hetsika rehetra avy amin'ilay drafitra.” Nomarihan'ireo mpitsara telo niara-nanapaka fa ny karazana fanombànana tahaka izany dia tsy maintsy miainga avy amin'ireo mason-tsivana ao anatin'ny Fepetra mifehy ny Fanombànana ara-Tontolo Iainana, izay tsy narahana aloha hatreto.
Na dia nankalaza nandritra ny fotoana fohy ilay fanapahankevitry ny Fitsaràna Avo misahana ny Fitantanan-draharaha aza izy ireo, malina ihany ireo Bolgara mpikatroka ho an'ny tontolo iainana tsy hijery azy io ho toy ny fifarànan'ny tolona ataony hiarovana an'i Pirin #SavePirin, satria hain-dry zareo tsara fa mety hangataka ilay tany mba ho an'ny tetikasa ara-pizahantany ataony ireo matanjaka mpikatsaka tombontsoa ara-bola. Voalohany indrindra, araka ny lalàna dia manana roa herinandro ilay ministera mba hanaovana fampakàrana ny didy, izay mety ho mpitsara dimy no hiaraka handinika azy.
Vaovao goavana ho an'ny @zazemiata sy ireo olona an'arivony maro manohitra ireo drafitra hanimbàna ny valan-javaboarim-pirenena ao #Pirin Bolgaria #SavePirin
Amin'ny ankamaroany dia ireo mpanefoefo no mitantana ny fampahalalambaovao mahazatra ao Bolgaria ary tsy miady velively ho an'ilay tolona ho fiarovana, fa vao mainka aza manosotra ireo hetsipanoherana ho tsy dia misy dikany ary tsy mahazo olona akory. Ohatra, lahatsoratra iray vao haingana miantso ireo mpikatroka ho “mpanao kolikoly maitso” (Bul. зелени рушветчии).
Mitàna vodilaharana ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana sy any Balkàna i Bolgaria raha fahalalahana manao asan-gazety no resahana